၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ (တပေါင်းလဆုတ် ၂ ရက်) တွင် နိုင် ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ် မည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်ဟောကိန်း ထုတ် - Update News
လာမည့် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ (တပေါင်းလဆုတ် ၂ ရက်) နက္ခတ်လပြည့်ချိန်တွင် အင်္ဂါဂြိုလ်ကို ရာဟုအရိပ်မည်းဖုံးလွှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇေယျာကို (နက္ခတ်ဥယျာဉ်) က ဟောကြားထားပြီး အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနန်းကျပြီး အထိန်းအသိမ်း ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
လာမည့် ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ နက္ခတ်လပြည့်ချိန် နံနက် (၁) နာရီ (၁၈) မိနစ်အချိန်တွင် အင်္ဂါနှင့်ရာဟုဂြိုလ်များ ဒီဂရီတိက်စြာ ပူးယှဉ်ကြမည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်က ဆိုသည်။ ထိုသို့ပူးယှဉ်မှုမှာ မြန်မာ့အရေးကိစ္စများအတွက် များစွာလွှမ်းမိုးပတ်သက်လာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
(၁၈) နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်ပူးယှဉ်လေ့ရှိသော ၎င်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နောက်ဆုံးအကြိမ်သည် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၂) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နက္ခတ်လကွယ်ချိန်တွင် ပူးယှဉ်ခဲ့သည်ဟု ပညာရှင်က ဖော်ပြထားသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပူးယှဉ်သောရာသီသည် ပြိသရာသီပင်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ထိုကာလအနီးနားတွင် ဦးနေဝင်းမိသားစုများနှင့်ပတ်သက်သည့်နိုင်ငံတော် ပဋိပက္ခပြသနာ ပေါ်ထွန်းခြင်း၊
တစ်နည်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဦးနေဝင်းနန်းကျမှု နှင့်အထိန်းသိမ်းခံရမှုဖြစ်စဉ်၊ထိုင်းနှင့်မြန်မာ နယ်စပ်စစ်ရေး ပဋိပက္ခပြသနာ တင်းမားမှုဖြစ်စဉ်နှင့် စစ်ပွဲများစွာ ဖန်တီးခဲ့ရမှုအဖြစ်အပျက်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဇာတာအရဗြိစ္ဆာလဂ်သခင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အဖြစ်အပျက်များသည် အင်္ဂါ နှင့်ရာဟု နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှပိုမို သိသာထင်ရှားလာနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
ဂြိုဟ်နီ အင်္ဂါအား ရာဟုကြတ်သောဖြစ်စဉ်ဟု ဆိုထားသည်။ အင်္ဂါ၏ လတ္တီတွဒ် တည်နေရာမြောက်လတ္တီတွဒ်၂၄ဒီဂရီ ၀၂မိနစ်ဖြစ်သဖြင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေဘိုမြို့ပေါ်မှ ဖြတ်သန်းနေချိန်ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားထားသည်။ ထိုနေ့ရက်အနီးနားတွင်မြန်မာပြည်အတွက် ထူးခြားသည့်ပြောင်းလဲမှုများပေါ်ပေါက်လာမည်။နိုင်ငံရေး ရှုပ်ထွေးမှု ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များ၊ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်စဉ် အများအပြားပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ တန်ခူးလကုန်ဆုံးပြီးချိန်ဧပြီလကုန်နောက်ပိုင်းမှသာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများပြန်လည် ရယူနိုင်မည်”လို့ ဆရာ ဦးဇေယျာကိုက ဟောကိန်းထုတ်ထားသည်။
ကိုးကား : Myanmar Harp
လာမည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ (တေပါင္းလဆုတ္ ၂ ရက္) နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္တြင္ အဂၤါၿဂိဳလ္ကို ရာဟုအရိပ္မည္းဖုံးလႊမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာကို (နကၡတ္ဥယ်ာဥ္) က ေဟာၾကားထားၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနန္းက်ၿပီး အထိန္းအသိမ္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
(၁၈) ႏွစ္လွ်င္ (၁) ႀကိမ္ပူးယွဥ္ေလ့ရွိေသာ ၎ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၂) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ နကၡတ္လကြယ္ခ်ိန္တြင္ ပူးယွဥ္ခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္က ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပူးယွဥ္ေသာရာသီသည္ ၿပိသရာသီပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုကာလအနီးနားတြင္ ဦးေနဝင္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ ပဋိပကၡျပသနာ ေပၚထြန္းျခင္း၊
တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဦးေနဝင္းနန္းက်မႈ ႏွင့္အထိန္းသိမ္းခံရမႈျဖစ္စဥ္၊ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ နယ္စပ္စစ္ေရး ပဋိပကၡျပသနာ တင္းမားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ ဖန္တီးခဲ့ရမႈအျဖစ္အပ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဇာတာအရၿဗိစာၦလဂ္သခင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အဂၤါ ႏွင့္ရာဟု နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်ပိုမို သိသာထင္ရွားလာႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။
ၿဂိဳဟ္နီ အဂၤါအား ရာဟုၾကတ္ေသာျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုထားသည္။ အဂၤါ၏ လတၱီတြဒ္ တည္ေနရာေျမာက္လတၱီတြဒ္၂၄ဒီဂရီ ၀၂မိနစ္ျဖစ္သျဖင့္အဂၤါၿဂိဳဟ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ထိုေန႔ရက္အနီးနားတြင္ျမန္မာျပည္အတြက္ ထူးျခားသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚေပါက္လာမည္။ႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ တန္ခူးလကုန္ဆုံးၿပီးခ်ိန္ဧၿပီလကုန္ေနာက္ပိုင္းမွသာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားျပန္လည္ ရယူႏိုင္မည္”လို႔ ဆရာ ဦးေဇယ်ာကိုက ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။
Previous Article ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၏သမီးဖြစ်သူ မနိုင်နိုင်အေးကို ယူနက်စကိုက အလုပ်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်း
Next Article ကမ္ဘာနိုင်ငံများကိုDr. Sasa ဒဲ့ပြောလိုက်ပြီ
လူထုခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ကြီး ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ.?
သူ့ရဲ့ဝေယျာဝေစ္စတွေကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့အခန်းဖော်တွေက ပြန်လွတ်လာတာကြောင့် ထောင်ထဲမှာတစ်ယောက်တည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကိုလျှံဖြိုးအောင်
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီးSBS တွင် ကီုရီယားနာမည်ကျော်များနှင့်အတူ မြန်မာ့အရေးပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆရာမ ချမ်းမြမြသော်